April 9, 2012 by chowutyee သင်္ကြန် အတွက် ရွှေရင်အေး
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 21 Comments	21 Responses
မုန်.လက်ဆောင်းဖတ် တွေ သာကူစေ.တွေက ဘယ်ကရမှာလဲလို.။ အဟင်.အဟင်. နိုချင်တယ်နော်။ အမြင်နဲ.ဘဲ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်…😀
ကျးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် Sis ၀တ်ရည်လေး ရေ😀
I surely treat you, Hmone Gyi!!😀
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့် ညီမ..🙂